Perihal Situs Web | Alexapagerankcheckerblog
May 3, 2018 Alexapagerankcheckerblog
Kursus Website DUMET School Ikhasi lewebhu (elibhalwa njengekhasi lewebhu) yidokhumenti efanelekile kwiWorld Wide Web kanye neziphequluli zewebhu. Isiphequluli sewebhu sibonisa ikhasi lewebhu kumqapha noma kudivayisi yeselula. Ikhasi lewebhu ngokuvamile lisho ukuthi yini ebonakalayo, kodwa leli gama lingase libheke nefayili yekhompyutha, evame ukubhalwa ku-HTML noma ulimi olufaniswayo lwe-markup. Iziphequluli zewebhu zixhumanisa izakhi ezihlukahlukene zezinsiza zewebhu zekhasi lewebhu elilotshiwe, njengezitayela zesitayela, izikripthi, nezithombe, ukuletha ikhasi lewebhu. Amakhasi wewebhu ajwayelekile anikezela i-hypertext efaka ibha lokuzulazula noma imenyu yecala elihlangene namanye amakhasi ewebhu nge-hyperlink, ngokuvamile ebizwa ngokuthi izixhumanisi. Enethiwekhi, isiphequluli sewebhu singayithola ikhasi lewebhu kusuka kuseva lewebhu elikude. Iseva yewebhu ingavimbela ukufinyelela kwinethiwekhi yangasese njenge-intranet yenkampani. Isiphequluli sewebhu sisebenzisa i-Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ukwenza izicelo ezinjalo. Perihal Situs Web
Perihal Situs Web Ikhasi lewebhu le-static (ngezinye izikhathi elibizwa ngokuthi ikhasi eliphazile / ikhasi elimisiwe) ikhasi lewebhu elinikezwa kumsebenzisi njengoba nje ligcinwe, ngokungafani namakhasi ewebhu ashukumisayo akhiqizwa uhlelo lwewebhu. Ngenxa yalokho, ikhasi lewebhu le-static libonisa ulwazi olufanayo kubo bonke abasebenzisi, kuzo zonke izimo, ngaphansi kwamakhono anamuhla wesiphakeli sewebhu ukuze baxoxisane nohlobo lokuqukethwe noma ulimi lwedokhumenti lapho kutholakala khona izinguqulo ezinjalo futhi iseva ilungisiwe ukwenza kanjalo Perihal Situs Web